Than | U.N.O.B | Page 3
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဓမ္မာလောကကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ဂုဏ၀ိသိဌပူဇာ ပွဲသို့ ခရစ္စမတ်နေ့ကမအားလပ်၍ မသွားရောက်နိုင်ခဲ့ကြသော ဒကာ ဒကာမများသည် (more…) Read More...
DBS မှလက်ခံရရှိသောဖိတ်ကြားစာ ဂုဏ၀ိသိဌပူဇာ မင်္ဂလာ ဓမ္မာလောက ဒါယိကာ ဒါယိကာမ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းအား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ – မီရမာမြို့၊ ဓမ္မာလောကကျောင်းတိုက်တွင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရား၏ သြ၀ါဒ စီမံချက်အရ သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူလျက်ရှိသော ဒေါက်တာအရှင်ပညာဇောတ သည် သီတဂူဆရာတော်ဘုရား၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Western Illinios University, Illinios သို့ ကြွရောက်ကာ ဆက်လက်ပညာသင်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆရာတော်အား တပည့်ဒကာ ဒကာမများက စုပေါင်းကာ နုတ်ဆက်ပူဇော် ကန်တော့သော (more…) Read More...
B.A.G မှလက်ခံရရှိသော Christmas နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲဖိတ်ကြားစာ ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျား – ကျွန်တော်များ မြန်မာဧ၀ံဂေလိအသင်းတော် (B.A.G) မှ ကျန်းမာစေကြောင်းနုတ်ခွန်းမင်္ဂလာဆက်သအပ်ပါသည်။ မင်္ဂလာရှိသော အခါသမယ၊ သခင်ယေရှုမွေးဖွားရာနေ့ရက် Christmas နေ့အထိမ်းအမှတ်ကို (more…) Read More...
ဒေါ်ခင်မာချို (ခ) မချို အသက် (၅၂)နှစ် Orlando, Florida, USA 11905 Pasteur Dr, Orlando FL 32826 နေ၊ သား မောင်ကြည်ဇော် နှင့် မောင်ထွန်းနေဇော် တို့၏မိခင် ဒေါ်ခင်မာချို (ခေါ်) မချို (AFC, Sushi)သည် December 6, 2009 (12/06/09)ညနေ (၆)နာရီ (၁၀)မိနစ်တွင် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများမှလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု(သားငယ်နှစ်ဦး)အားလာရောက်အားပေးနှစ်သိမ့်နိုင်ကြရန် (more…) Read More...
UNOB အဖွဲ့ဝင်များ၏ Thanksgiving Dinner ဖိတ်စာ အဖွဲ့ဝင်များခင်ဗျား – အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ပျော်ရွှင်စွာအတူဆင်နွှဲနိုင်ရန် Thanksgiving Dinner တခုကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းစီစဉ်ထားပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်မိသားစုများအားလုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် လေးစားခင်မင်စွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ Thanksgiving Eve 11/25/2009 Wednesday Dinner (more…) Read More...
မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်။ မန်ကျည်းယို၊ ဇီးယို၊ မက်မန်းပေါင်း၊ ဂွေးသီးချဉ်စပ်၊ ရှောက်ပေါင်း ဘာစားမလဲ စားချင်တာစား။ လက်တွန်းလှည်းထဲထည့် အဖုံးမပါ ဘာမပါနဲ့ လေဓာတ် ရေဓာတ် နေဓာတ်ကို သဘာဝကျကျ ရယူထားတဲ့ မြန်မာကြိုက် သွားရည်စာလေးတွေ။ ဘာ မဆလာတွေသုံး၊ ဘာ အရောင်တင်မှုန့်တွေသုံး၊ ဘာ ငံပြာရည်တွေ သုံးထားလည်းတော့ မသိဘူး။ ချဉ်ငန်စပ် ရောင်းနေတဲ့လူရဲ့ ချွေးစက်တွေတောင် ပါချင်ပါဦးမှာ။ ဘယ်လောက် သဘာဝနဲ့ နီးစပ်သလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ ရလို့လား။ တွေဝေမနေနဲ့ တရုတ်တန်းသွား တုတ်ထိုးလေး (more…) Read More...
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) United Nationals Organization of Burma (UNOB) အဖွဲ့ဝင်များထံမှ UNOBအတွက်အကြံဥာဏ်များဖိတ်ခေါ်ရယူခြင်း August 15, 2009 လူကြီမင်းများခင်ဗျား။ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ ECအဖွဲ့သို့တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ UNOB WEBSITE မှတဆင့်၎င်း ပေးပို့သောအကြံပြုစာများကိုလက်ခံရရှိပါ သည်။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များထံမှအကြံပြုမှုများသည် UNOBအသင်းကြီး၏ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အရေးကြီးသောကဏ္ဍတရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းကြီးတခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံမှုရှိသော အကြံပြုချက်များရရှိရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီ၏အကြံပြုစာများကို လက်ခံရရှိနိုင် ရန် ဖိတ်ခေါ်တောင်းခံအပ်ပါသည်။ မိမိတို့၏အကြံပြုချက်များကို UNOB PO Boxသို့၎င်း၊ ECများ၏ emailသို့၎င်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။ UNOBအဖွဲ့ကြီးမှဆောင်ရွက်စေလိုသည်များကို အမှတ်စဉ်(၁)၊ အမှတ်စဉ်(၂)၊ စသည်ဖြင့်ရေးသားပေးကြစေလိုပါသည်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မိသားစုအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ အလုပ်အမူဆောင်အဖွဲ့ United Nationals Organization of Burma (UNOB) P.O. Box. 20196 West Palm Beach, FL 33416 Read More...